Iyini yobudala Kuhle ukuthola Color test izimpumputhe? - 💡💻 Iris - Blue Hlunga Ukukhanya Eye Ukuvikelwa 🛌👀
Iyini yobudala Kuhle ukuthola Color test izimpumputhe?
Color ubumpumputhe yaziwa nangokuthi umbala umbono ukuntula. Ngenxa umbala ubumpumputhe, umuntu akakwazi ukubona imibala.
ngokuvamile, umuntu akakwazi ukuhlukanisa phakathi umbala obomvu noluhlaza okotshani.
Kunzima ukuthola izinkomba ezisheshe zivele umbala yobumpumputhe ingane.
Izingane abe span eliphansi ukunakwa lapho baphonsa imibala ephepheni.
Kuphela nengane eyodwa kuthintwa umbala yobumpumputhe mayelana 25 izingane.
Ngenxa umbala ubumpumputhe, ingane has embonweni wasebusuku enhle kakhulu.
Izingane babe nezindaba ngenkathi ufunda ngokusebenzisa Amakhasi anombala ezifana ngokusebenzisa amakhasi ngombala oluhlaza noma obomvu ngoba ubonakalisa ngamehlo abo futhi bakhononde ngamamaki amehlo abo.
Color ubumpumputhe ngokuvamile okubangelwa kofuzo.
I "Izigaxa" banesibopho imibala okuyinto zitholakala endaweni ngemuva iso.
Ngenxa yokushoda Izigaxa amaseli, ingane ukuzalwa ngemibala ngobumpumputhe. Ngokusho Optometric Physicians of Washington emhlabeni 8%, abafana zithonywa ubumpumputhe umbala okuyinto esingaphansi amantombazane.
Kusho ukuthi isilinganiso umbala ubumpumputhe abafana ingaphezu amantombazane. Kunzima ukubona imibala uma umfutho ukukhanya liphansi.
Lapho ingane 4 iminyaka izinyanga ubudala the Izigaxa ayaqala othuthukayo okuyinto kuyinqubo engokwemvelo e ingane evamile.
Ngenkathi ingane colorblind Izigaxa angekho ngenxa okuyinto ingane ayikwazi ukuhlukanisa imibala ngokuvamile bebona onsomi noma brown esikhundleni umbala obomvu noluhlaza okotshani.
It is hhayi nakanjani kusho ukuthi colorblind abakwazi ukubona imibala.
Colorblind angeke ukuhlukanisa imibala kanye bangase ukudida lapho ngiphakamisa imibala ehlukene.
A colorblind akakwazi ukuhlukanisa imibala baze bafinyelele 4 ubudala.
Ezinye colorblind abakwazi ukubona imibala ngenxa isifo okuthiwa achromatopsia. nengane eyodwa kuphela kuzo 40 izingane ayizinkulungwane kuthintwa "achromatopsia".
Ubudala yokuhlola Colorblindness
mayelana 4 izingane ubudala bayakwazi uvivinyo imibala zabo.
Udokotela ngokuvamile ucela ngetigaba phakathi umbala obomvu noluhlaza okotshani imigqa noma amagama noma izibalo.
Uma umfundzi akwati ngetigaba sibalo anemibala noma imigqa ke ingane ukusula test umbala umbono futhi uma kungenjalo ke ingane colorblind.
Abaningi nolunye uvivinyo ithathwe amachashazi colorblind ezinemibala ikakhulukazi izibalo zinikwa ingane ukuhlonza imibala imiphumela ecacile uma yena / yona ayikwazanga bakwazi ukukhomba Umumo anemibala ezinikezwe sibalo.
Lezi zinombolo ngokuvamile ngemibala abomvu green. Siyazi ukuthi kokuthola test kuyabiza.
Do not worry because with Vision test https://iristech.co/test-vision Kuzokusiza uthole ukuthi ngabe wena colorblind noma cha ngaphandle kokukhokha penny olulodwa.
Akusho ukuthi abayizimpumputhe umbala abakwazi ukubona imibala noma kuvimbela ukukwazi umsebenzi we imibala.
It is nje yokuthi okuyinto kubangelwa kwezakhi okuhambisa ngokusebenzisa ufuzo.
Ochwepheshe baye basikisela ukuthi uma ingane eba neminyaka 4 khona-ke kumelwe ukuthi ukuhlola umbala Umbono test.
Nibafundise ukucaciswa umbala futhi sisize labo ukukhomba isikhundla amarobhothi abangakwazi ukuhlukanisa phakathi umbala obomvu noluhlaza okotshani.
Vision kuyinto ikhambi ephelele colorblindness yakho. Thola software futhi uzokwazi ukubona imibala ngokuvamile ngaphandle kwemiphetho.